Cawil Cabdille – Kaasho Maanka
Qaybta: Arrimaha Bulshada
Maalin dhawayd ayaa waxa aan dhagaystay muxaadiro uu jeedinayo wadaad Soomaaliyeed (Sheekh Mustafe Xaaji Ismaaciil). Waxa uu ka hadlayay arrin aynaan uga baran wadaad Soomaaliyeed in uu ka hadlo. Wadaad waxaa lagu yaqaannay in uu ka hadlo aakhiro iyo adduun; adduun qofka joogaa hamayn-dhaxmo ku yahay iyo aakhiro lama huraan ah. Adduunyadu agtiisa macno kama leh oo waxaa liibanay qofkii cimrigiisa...
Qoladiinnan akhriska iyo falsafaddaba jecel waxa aan halkan idin kula wadaagayaa sheeko ka mid ah tobonnaankii sheeko ee laga wariyay Faylasuufkii Soqraad. Waa wada sheekaysi dhex maraya isaga iyo labo barbaar oo ay isku magaalo yihiin. Sida caadada ah marka ay doodi furmayso waa in ay jirtaa kala duwaansho ku saabsan madwuuca laga hadlayo. Halkan, waxaa looga doodayaa mawduuc aynnu u wada...
Waa barbaar caato la miiqmay, gar iyo shaaribana aan dhabankiisa lagu arag. Waxa uu ku dul fadhiyaa roog, wuxuuna si aan libiqsi lahayn u dhawrayaa Kitaab Quraan ah oo uu tobanka farood ba ku hayo. Daaqad garabkiisa ku aaddan waxaa ka soo muuqday cadceeddii oo qof baarkiis joog le’eg. yabaq iyo alalaas qofka miyirkiisa shaxaadaya ayaa bannaanka daaqadda ka baxaya. Balse, barbaarku dhegey-jalaq...